Ikozvino inowanikwa yechitatu beta ye macOS 10.13.5 yevagadziri | Ndinobva mac
Vakomana vanobva kuCupertino vakaparura nezuro masikati (nguva yeSpanish) iyo yechitatu beta yevagadziri veMacOS 10.13.5. Zvinotaridza kuti mahofisi eCupertino haazorore kunyangwe pazuva revashandi. Kana maawa mashoma apfuura kubva kutanga kwayo, hakusati kuve nenhau maererano neshanduro yapfuura.
Zvichida kuti mukati mezuva rese, ivo vanogadzira vanozoenda kubasa uye nhau idzo Apple isina kuisa mumanotsi ekuvandudza dzichazotanga kuwanikwa. Vagadziri vese vanogona teerera iyo yekuvandudza kuburikidza neMac App Store. Kana iwe usati warodha pasi chero eepashure mabetas parizvino, tinogona kukopa yazvino beta kubva kune yekuvandudza portal.
Iwo maviri ekutanga betas e macOS 10.13.5 zvakare yaisanganisira mukana wekugona sync meseji kuburikidza neICloud nemidziyo yese izvo zvine chekuita neakafanana account, chinhu chakabviswa kubva mune yekupedzisira vhezheni ye macOS 10.13.4. Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti zvava kuda kupedza bvunzo dzairi kuita neiri nyowani basa, saka zvingangoita kuti panguva ino ichazosvika kune vekupedzisira vashandisi, pamwe neinotevera iOS yekuvandudza, nhamba 11.4, iyo Apple zvakare yakatanga beta yechitatu zvakare yevagadziri.
Kana mangowani mashandiro matsva akaunzwa neApple mune ino yechitatu beta kune macOS 10.13.5 vagadziri vaonekwa, isu tinokuzivisa iwe. Zvinotonyanya kuitika kuti zuva rese, Apple inotangisa yechitatu beta yeiyi vhezheni kune vashandisi veveruzhinji beta chirongwa. Parizvino, hatizive zuva rekutarisirwa kwenyaya iyi inotevera, kunyange hazvo zvese zvinoita senge zvicharatidza kuti zvichadaro pakupera kwemwedzi uno waMay, mazuva mashoma pamberi peWWDC, apo Apple ichazopa vhezheni inotevera yeMacOS, iOS, tvOS, uye tvOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo yechitatu beta ye macOS 10.13.5 yevagadziri yave kuwanikwa
Apple inogona kufarira kutenga yeboka rekutsikisa Condé Nast